China Insulated Nzvimbo Bag 32-Inogona Kugadzira uye Fekitori | Kinghow
Iyo yakavhurika yekuvhura dhizaini inoita kuti iti kunhonga zvinhu, kunyangwe kana iwe ukaisa zvinhu zvakawanda iwe unogona kuona izvo zvaunoda kamwechete. Unogona kutakurwa papfudzi kuti usunungure maoko ako. Yakagadzirwa nehurefu padhi kudzikisa kumanikidza papfudzi.
Inotonhorera Tote Bag Zvimiro
KUKWANISA KWAKANAKA: inotonhorera bhegi inogona kubata kusvika makumi maviri nematatu (marita matanhatu) nevhoriyamu. Unogona kutora magaba makumi matatu nemaviri ezvinwiwa zvako zvaunofarira pamwe nechando. Izvo zvikamu zviviri zvakasungirirwa zvinobvumidza kurongedza zvinwiwa zvakaparadzaniswa nechikafu chakaoma. Izvo zviyero zvakaenzana zvingangoita 14.9 x 8.6 x 11 inch / 38 x 22 x 28 cm (L x W x H). Iyo yakanaka kune yako-yemhuri pikiniki yese kana kurongedza izere nezvikafu zvishoma zvevechidiki mitambo yekudzidzira kunze, kumahombekombe, kudzika musasa, kukwira, masiteti, nhabvu mutambo uye nezvimwe.
LEAKPROOF LINING: Kunze kweiyo inotonhorera bhegi inovakwa nepamusoro-soro, isina mvura, isina tsvina-chiratidzo oxford machira ayo anoita kuti igare, isapinda mvura uye nyore kuchenesa. Yakakwidziridzwa kubva kuchinyakare kusona kuvaka, iyo yepazasi chikamu inotora inopisa yekutsikirira tekinoroji kubatanidza iyo lining musono ichipa yakanakisa leakproofness.
YAKAWANDA NGUVA YAKADZIDZISWA: Chikamu chepamusoro chinoshandisa 210D oxford machira uye EPE furo kuchengetedza zvinhu zvakaoma, uye chikamu chepazasi chinoshandisa High-Density kuputira zvinhu uye leak-proof liner mukati mehombodo zvinoshanda pamwechete kuve nechokwadi chekuti inochengeta chikafu chinotonhora uye chitsva Maawa gumi nemaviri. Inogona kushandiswa pakubata chikafu masevhisi uye mhinduro hombe yekutakura chikafu kubva kuchitoro.
MULTIPLE POCKET: Yakashongedzerwa ne1 yakafara homwe yepamusoro, maviri eparutivi homwe, uye maviri epamberi muhomwe, akawanda homwe anogona kusangana nezvinodiwa zvekuchengetedza zvakasiyana zvinhu. Inogona kuve yekushandisa yako wega duffel bhegi. Yakagadzirwa nemubato wakapetwa uye tambo inodzikika yemapfudzi iyo inopa matatu anotakura masitaera. Iwe unogona kusarudza kutakura neruoko kana kutakura netambo yepafudzi. Iwe unogona zvakare kuisa bhegi iri pasutukesi yako kuti ufambe futi.
VERSATILE SHANDISA: Iyi inotonhorera bhegi inogona kurongedzwa nemasikati uye mashoma echando mapaketi emisasa, uye inogona kuiswa mutangi reSUV yako futi. Paunotora rwendo nendege, inogona kuipeta yakati sandara ndokuirongedza musutukezi yako.
20 Makani Makuru Akapfava Bhegi Anotonhora Mabhegi
Inoita Inotonhora Tote Bhegi Yekutakura
Nzvimbo inotonhorera - Beverage uye Kunwa Kuchengetera Gor ...